Tsvaga iyo Zodiac editorials
Nhoroondo yehupenyu nerufu uye vimbiso yekusafa yakanyorwa mune Zodiac. Mumwe munhu aizoverenga anofanira kudzidza hupenyu husati hwazvarwa uye nekutevera iko kukura kuburikidza nezvinangwa uye zvishuwo apo achifamba kuburikidza nenyika ino.
Vol. 3 APRIL, 1906. Nha. 1
NGUVA yedu isati yasvika, varume vakangwara vakaverenga nhoroondo yekusikwa kwezvinhu zvese zviri muchadenga, sezvazvaive zvisina kunyorwa uye zvakanyorwa nenguva-izvo zvisina kujeka uye zvisingasarure zvevanyori.
Kuburikidza nezviitiko zvakawanda uye zvinodzokororwa pane vhiri rekuzvarwa patsva munyika ino, varume vakave vakachenjera; vaiziva kuti muviri wemunhu waive wakadzokorora muchidimbu chehukuru hwedenga; ivo vakaverenga nhoroondo yekusikwa kwezvese zvakasikwa sezvo yakaverengerwazve mune genesis yemunhu mumwe nemumwe; vakadzidza kuti zodiac kumatenga yaigona chete kunzwisiswa uye kududzirwa nechiedza zodiac mumuviri; vakadzidza kuti mweya wemunhu unobva kune izvo zvisingazivikanwe uye zvinotsvedza uye zviroto pachazvo zvive pachena; uye kuti inofanira kumuka ichipfuura nehana ichipinda mukuziva kusingaperi kana yaizopedzisa nzira ye zodiac.
Zodiac inoreva "denderedzwa remhuka," kana "denderedzwa rehupenyu." Zodiac yacho inonzi neyemuchadenga ichiita bhandi rekufungidzira, dunhu, kana denderedzwa rematenga, rakakamurwa kuita mapoka enyeredzi gumi nemaviri kana zviratidzo. Boka renyeredzi roga roga kana chiratidzo chinosvika makumi matatu ematanho, gumi nevaviri pamwe chete vachiita denderedzwa rose remazana matatu nemakumi matanhatu madhigirii. Mukati medenderedzwa iri kana zodiac mune nzira dzezuva, mwedzi uye mapuraneti. Mapoka enyeredzi anonzi Aries, Taurus, Gemini, Cancer, Leo, Virgo, Libra, Scorpio, Sagittarius, Capricornus, Aquarius, naPisces. Zviratidzo zvemamwe mapoka enyeredzi ndi ♈︎ ♈︎, ♊︎, ♋︎, ♌︎, ♍︎, ♎︎, ♏︎, ♐︎, ♑︎, ♒︎, ♓︎. Zodiac kana denderedzwa remapoka enyeredzi anonzi anowedzera madhivhiri masere parutivi rumwe nerumwe rwe equator. Zviratidzo zvekuchamhembe zviri (kana kuti pamwe aive makore mazana maviri nemakumi mashanu apfuura) ♈︎ ♉︎, ♊︎, ♋︎, ♌︎, ♍︎. Zviratidzo zvezasi ndi are, ♏︎, ♐︎, ♑︎, ♒︎, ♓︎.
Kuti ive yakachengetedzwa mundangariro dzevanhu, uye nekupiwa kwatiri kubva mutsika, zodiac inofanira kuve ine chekuita nehupenyu hwavo. Zodiac ndiyo yaitungamira vanhu vese vekare. Yakanga iri karenda yavo yehupenyu - yekarenda chete yekuvatungamira mune zvekurima uye zvimwe zvehupfumi. Sezvo rimwe nerimwe renyeredzi gumi nembiri dzedenga dzakatanga kuoneka pane imwe nzvimbo kumatenga, ivo vakaziva kuti ichi chiratidzo cheimwe nguva uye ivo vaitonga zvavakaita uye vakabata kumabasa nebasa rakaitwa nemwaka.
Zvinangwa uye zvinangwa zvehupenyu hwemazuva ano zvakatosiyana nezviya zvevakuru zvekuti zvakawoma kune murume wanhasi kukoshesa mabasa emaindasitiri nehunyanzvi, imba, uye hupenyu hwechitendero hwevanhu vekare. Kuverenga kwenhoroondo uye ngano kunoratidza kufarira kwakatarwa uko vanhu venguva dzekutanga vakatora mune zvese zvakasikwa zviitiko, uye kunyanya zviitiko zvematenga. Kunze kwekureva kwayo chaiko, kune zvakawanda zvinoreva kuti zvinotorwa kubva kungano yega uye chiratidzo. Zvinoreva mashoma emapoka enyeredzi akapiwa mumabhuku. Aya maratidziro anoedza kuratidza zvakati wandei zvirevo zvezodiac-sezvazvinoita kune munhu. Iyo inotevera yekushandisa inogona kuwanikwa yakapararira kuburikidza nemabasa evaya vakanyora pane chinyorwa.
Zuva parakapfuura zuva remvura, varume vakaziva kuti kwaive kutanga kwematsutso. Vakatumidza boka renyepedzeri, ndokutumidza zita rinonzi, "Mapere," gondohwe, nekuti yaive nguva yemakwayana kana makondohwe.
Mapoka enyeredzi aitevera, uye mukati merakaitika zuva rake, vakaverenga mazita avo akateedzana.
Zuva parakapinda mune enyeredzi yechipiri, ivo vakaziva kuti yave nguva yekurima ivhu, ravakaita nenzombe, uye sezvo yaive mwedzi wakazvarwa mhuru, vakatumidza boka renyeredzi "Taurus," nzombe.
Sezvo zuva parakakwira mwaka mwaka unodziya; shiri nemhuka zvainge zvasangana; pfungwa dzevechidiki nenzira yemasikirwo dzakatendeukira kumifungo yerudo; vadikani vakava nemanzwiro, mavhesi akaumbwa uye akafamba ruoko neruoko kuburikidza neminda yakasvibira uye pakati pemaruva anotumbuka; uye saka boka renyeredzi rechitatu rakanzi "Gemini," mapatya, kana vadikani.
Mazuva akawedzera kureba sezvo zuva rairamba richikwira kumusoro kumatenga, kusvika asvika padanho repamusoro murwendo rwake, paakayambuka solstice yezhizha uye achipinda muchikamu chechina kana chiratidzo chezodiac, mushure maizvozvo mazuva akaderera muhurefu sezvo zuva rakatanga gwara rake rekumashure. Nekuda kwekutenderera uye kudzoka kwekutenderera kwezuva, chikwangwani chakanzi "Kenza," crab, kana lobster, inonzi so nekuti mutambiro unodzora wecabaka wakatsanangura mafambiro ezuva mushure mekunge apinda muchiratidzo ichocho.
Kupisa kwezhizha kwakawedzera sezvo zuva raipfuurira nerwendo rwake kuburikidza nechishanu chiratidzo kana nyeredzi. Hova dzemumasango dzaiwanzoomeswa uye mhuka dzesango dzaiwanzo pinda mumisha kutsvaga mvura uye mukutsvaga zvakabatwa. Ichi chiratidzo chakanzi "Leo," shumba, sekuomba kweshumba kazhinji yainzwika usiku, uyezve nekuti kuoma kwesimba uye neshumba zvakafanana nekekupisa uye nesimba rezuva panguva ino.
Zhizha rakanga ranyatsobuda apo zuva rakanga riri mune chiratidzo chechitanhatu kana kwenyeredzi. Ipapo chibage negorosi zvakatanga kuibva muminda, uye sezvo yaive tsika yekuti vasikana vaunganidze zvisote, chiratidzo chechitanhatu kana boka renyeredzi rakanzi "Virgo," mhandara.
Chirimo chaive zvino chave kuswedera padhuze, uye zuva parakayambuka rwonzi paiyo autumnal equinox, pakanga paine chiyero chakakwana pakati pemazuva nehusiku. Ichi chiratidzo, saka, chakanzi "Libra," zviyero, kana zviyero.
Panenge panguva apo zuva rakanga rapinda muboka rechisere, iwo echando aiita senge achiruma uye nekuita kuti zvinomera zvife uye kuora, uye nemhepo dzine muchetura kubva kune dzimwe nzvimbo, dzaiparadzira hosha. saka chiratidzo chechisere chakatumidzwa “Scorpio,” chishuvo, dhiragoni, kana chinyavada.
Miti yacho yaive zvino yaregedzwa nemashizha uye hupenyu hwemiriwo hwakanga hwaenda. Zvino zuva parakapinda mumapoka enyeredzi yechipfumbamwe, mwaka wekuvhima wakatanga, uye chiratidzo ichi chakanzi "Sagittarius," museve, Centaur, uta nemuseve, kana museve.
Panguva yezuva rechando zuva rakapinda muboka regumi uye rakazivisa kuti iye asvika pazasi murwendo rwake rukuru, uye, mushure memazuva matatu, mazuva akatanga kusvika akareba. Zuva rakabva ratanga rwendo rwake rwekuchamhembe nenzira isingafambi, uye chiratidzo chegumi chakanzi "Capricorn," mbudzi, nekuti nguva yekudyara mbudzi yairamba ichikwira makomo munzira yakatenderedza, yaifananidzira nekufamba kwezuva chaiko.
Zuva parakanga rapfuura mukati merumwe nyenyedzi gumi neimwe, kwaiuya kuchinaya kwazvo uye negwinyiro rakakura, ziziya rakanyungudika uye kazhinji raikonzera mafesitisi ane ngozi, saka chiratidzo chegumi neimwe chakanzi "Aquarius," murume-wemvura, kana chiratidzo chemvura.
Nekufamba kwezuva muchisikwa chegumi nemaviri, ice mu nzizi dzakatanga kutumbuka. Mwaka wehove wakatanga, saka chiratidzo chegumi nembiri chezodiac chakanzi "Pisces," hove.
Saka zodiac yezviratidzo gumi nemaviri kana mapoka enyeredzi akaiswa pasi kubva kuzvizvarwa nezvizvarwa, chiratidzo chimwe nechimwe chairatidzika kutora nzvimbo pamberi pacho nguva imwe neimwe yemakore mazana maviri nemazana mashanu nemashanu. Shanduko iyi yaive yakakonzerwa nekuvira kwezuva masekondi mashoma pagore rega rega remazuva makumi matatu nemashanu, mazuva makumi mana nemashanu, iyo nguva yaidikanwa kuti iye apfuure nezviratidzo gumi nembiri, uye kudonha kusingaperi kumashure kwakamuita kuti ave mumakore makumi maviri nemakumi mapfumbamwe nemashanu chiratidzo chekuti akange ave mumakore makumi maviri nemakumi mapfumbamwe nemashanu, zvisati zvaitika. Iyi nguva yakakura-inonzi gore rakasarudzika-inokonzerwa nekurembedzwa kwemakona, apo danda re equator rakatenderera kamwe padanda re ecliptic.
Asi kunyangwe chiratidzo chega chega chikaonekwa sechichinja chinzvimbo chayo pamberi pacho mumakore ese mazana maviri nemazana mashanu nemashanu, pfungwa imwechete yechiratidzo chimwe nechimwe chinotaurwa pamusoro Marudzi anogara munzvimbo dzinopisa anogona kuve nezvakakodzera nguva dzawo, asi pakati pevanhu vese pfungwa dzakafanana dzaizokunda. Tinoona izvi munguva yedu. Zuva rave riri mumapisisiti anopfuura makore mazana maviri nemashanu nemakumi mashanu, kutenderera kwemesia, uye ikozvino kuri kupfuura kupinda mu aquarius, asi isu tichiri kutaura nezveees sechiratidzo cheiyo vernal equinox.
Izvi ndizvo zvinhu zvepanyama hwaro hwezviratidzo zodiac iri kudanwa sezvavari. Izvo hazvisi zvinoshamisa sezvazvinogona pakutanga kuita senge pfungwa dzakafanana pamusoro penyaya yezviratidzo dzinofanira kukunda pakati pevazhinji vakaparadzaniswa uye kubudikidza nenguva dzese, nekuti ndiyo yaive tsika yechimiro uye, sezvatoratidzwa kare, zodiac yakashanda sekarenda kutungamira vanhu mune kwavo kwezvavano, kunyange sezvazvinoshanda manje kutitungamira mukugadzira makarenda edu. Asi kune zvimwe zvakawanda zvikonzero zvekuti chengetedza pfungwa dzakafanana pakati pemadzinza akasiyana, nezve mapoka enyeredzi, ayo anogona kuratidzika kune vamwe seungananidzo yekusanzwisisika yezviratidzo zvisina chiratidzo nezviratidzo.
Kubva pamazera ekutanga-tanga, kwave kune vashoma vashoma varume vakawana ruzivo rwehumwari, nehungwaru, uye nesimba, nenzira uye maitiro asina kujairika kuzivikanwa kana kuteverwa zviri nyore. Varume vanamwari ava, vakatorwa kubva kurudzi rwese uye kubva kurudzi rwese, vakabatana kuita hama dzakafanana; chinhu cheuhama ndechekushandira zvakanakira hama dzevanhu. Aya ndiwo “Masters,” “Mahatmas,” kana kuti “Vakuru Vanun'una,” vanotaurwa nezvavo naAmai Blavatsky mu "Chakavanzika Dzidziso," uye kubva kwaari, anonzi dzidziso, yakawana dzidziso dziri mubhuku iri rinoshamisa. Hukama uhu hwevanhu vakangwara hwaisazikamwa nenyika zvachose. Ivo vakasarudza kubva kurudzi rwese, sevadzidzi vavo, sekunge vaive mumuviri, mupfungwa uye mutsika vaikodzera kugamuchira dzidziso.
Kuziva izvo vanhu venguva ipi neipi vanogona kunzwisisa, uku kwehama yevakachenjera kwakatendera vadzidzi vavo - sevatumwa uye vadzidzisi vevanhu vavakatumirwa kwavari-kuti vape vanhu tsananguro dzakadaro dzeruzivo rwezodiac sezvavaizobatira ivo vaviri. chinangwa chekupindura kune zvavanoda uye panguva imwechete chengetedza mazita nezviratidzo zvezviratidzo. Zvemidzimu uye zvemukati dzidziso zvakange zvakachengeterwa vashoma vaive vakagadzirira kuzvigamuchira.
Iko kukosha kune vanhu kwekuchengetedza ruzivo rwezviratidzo zvezodiac kuburikidza nematanho ese ekuvandudzwa kwemadzinza kuri muchokwadi chekuti chiratidzo chega chega hachina kungopihwa uye chinoenderana nechikamu chemuviri wemunhu, asi nekuti mapoka enyeredzi, semapoka. chenyeredzi, inzvimbo chaidzo dzemashiripiti muiri muviri. nekuti iwo mapoka enyeredzi akafanana pachitarisiko uye basa. Kupfuurirazve, zvaive zvakafanira kuchengetedza ruzivo rwe zodiac mundangariro dzevanhu nekuti vese vanofanira munzira yekuvandudza vazive chokwadi ichi, kuti imwe neimwe, kana yagadzirira, yaizowana rubatsiro runodiwa uye parutivi rwuri zodiac.
Ngatimboenzanisai mhuka kana zvinhu uye zviratidzo zvezodiac, nenhengo dzomuviri dzomuviri dzakaiswa zviratidzo nezviratidzo.
Aries, gondohwe, yaive mhuka yakapihwa musoro nekuti nyama iyoyo inoitwa inoonekera nemusoro wayo. nekuti chiratidzo chehwamanda, iwo chiratidzo chiratidzo cheyees, ndicho chakaumbwa nemhino, nemeso pameso emunhu wese; uye nekuti chiratidzo che aries chinomirira hafu yedenderedzwa kana hemispheres yehuropi, yakabatana pamwe netsetse rwependende, kana, mutsara wepamberi unokamurwa kubva kumusoro uchibva wakatsikidzika zvichidzika, ipapo zvichiratidza kuti mauto ari mumuviri anosimuka nenzira yemakoni. uye medulla oblongata kune dehenya uye vadzokere kuzovandudza muviri.
Nzombe yacho yakapihwa mutsipa nehuro nekuda kwesimba guru reiyo mhuka iri mumutsipa wayo; nekuti simba rekusika rakanyatsobatana nehuro, nekuti nyanga mbiri dzenzombe dzinomiririra nzira dzakadzika uye dzakakwira nemakwiri maviri ari mumuviri, sezvavanoburuka uye achikwira kumusoro, nepamutsipa.
Mapatya, kana vadikani, vanomiririrwa zvakasiyana nemaalmanacs akasiyana siyana uye makarenda, vaigara vachichengetedza pfungwa yevanopikisa vaviri, yakanaka uye yakaipa iyo, kunyangwe yega yega yakanga yakatemesana mukati mayo, ese ari maviri aive achiri maviri asina kubatana uye akabatana. Izvi zvakagoverwa maoko nekuti, pakapetwa, maoko nemafudzi zvakaumba chiratidzo gemini, ♊︎; nekuti vanoda vaizoisa maoko avo kunhivi dzega; uye nekuti ruoko rwerudyi uye rweruboshwe maoko nemaoko ndiwo maviri masimba akasimba uye asina kunaka emagineti mumuviri pamwe nekuve nhengo dzechiito nekuuraya.
Crab, kana lobster, yakasarudzwa kumiririra chipfuva uye thorax nekuti chikamu icho chemuviri chine mapapu ane kutsika nekumbira kufamba kwe Crab; nekuti makumbo echero akafananidzira zvakanaka mbabvu dzepora; uye nekuti cancer, ♋︎, sechiratidzo chakaratidza mazamu maviri ne hova mbiri idzi, uye zvakare nemanzwiro adzo emagineti nemagineti.
Shumba yakatorwa semumiriri wemoyo nekuti iyi yaive mhuka yakasarudzika yakasarudzika kumiririra ushingi, simba, hushingi uye humwe hunhu hwaigariswa pamoyo; uye nekuti chiratidzo chemo, ♌︎, chakarondedzerwa pamuviri sternum nekabvu kurudyi uye kuruboshwe kuruboshwe, pamberi pemoyo.
Nekuda kwekuchengetedza uye kubereka kwemunhukadzi, virgo, mhandara yakasarudzwa kumiririra chikamu icho chemuviri; kuchengetedza mbeu dzehupenyu; uye nekuti chiratidzo che virgo, ♍︎, zvakare chiratidzo cheiyo inobereka matrix.
Libra, ♎︎, zviyero kana zviyero, yakasarudzwa kuratidza kupatsanurana kweiyo trunk yemuviri; kusiyanisa pakati pemuviri wega wega kunge uri wechikadzi kana wemurume, uye nekufananidza neVirgo uye scorpio zvese zviri nhengo dzebonde.
Scorpio, ♏︎, chinyaviro kana asp, inomiririra chiratidzo chechirume sesimba nechiratidzo.
Zviratidzo sagittary, capricorn, aquarius, pisces, iyo inomirira matako, mabvi, makumbo nemakumbo, sekudaro, haimiriri denderedzwa kana zvemidzimu zodiac iyo yatiri kuda kubata nayo. Naizvozvo ichasiyirwa kune inozotevera yekunyororapo iyo ichizoratidzwa kuti zodiac ndeyeiko kugadzirwa kwezvinhu zvakasikwa nemasimba ese nemisimboti inoshanda uye sei nemaitiro ayo aya misimboti anoendeswa kumuviri, uye kune chivakwa chitsva. muviri kana umbowo hwemunhu, hwepanyama pamwe nekunamata.